Luke Shaw Hooyo Sheeko Xogta Xogta Aan Bixin Karin
Home XAALADAHA FOOTBALLADA EE QARANKA Ciyaartoyda Kubadda Cagta Ingariiska Luke Shaw Hooyo Sheeko Xogta Xogta Aan Bixin Karin
LB wuxuu soo bandhigayaa sheekada dhammaystiran ee bidixda bidixda oo si fiican loo yaqaan 'Nickname'; 'Six million dollar man'. Our Luke Shaw Childhood Story sheeko xariifnimo ah Xaqiiqooyinka Weriyeyaasha waxay xaqiiqo kaa siinayaan dhacdooyinka dhamaystiran ee dhacdooyinka la taaban karo laga bilaabo wakhtiga carruurnimada ilaa taariikhda. Falanqeyntu waxay ku lug leedahay sheekadiisa noloshiisa ka hor caan ka ah, nolosha qoyska, nolosha xiriirka iyo wixii kale ee run ah oo aan la ogeyn oo ku saabsan isaga.
Haa, qof kastaa wuu ogyahay xawaaraha iyo cidhibta bidix ee dhimashada, laakiin qaar ka mid ah waxay tixgelinayaan nooca loo yaqaan 'Shaw's Biography' oo ah mid xiiso leh. Hadda oo aan adieu dheeraad ah, aynu bilaabi.
Luke Shaw Hooyo sheeko dheeri ah Xaqiiqooyinka loo yaqaan 'Biography' -Nolosha Hore
Luke Paul Hoare Shaw wuxuu ku dhashay maalintii 12th July ee 1995 ee Kingston upon Thames, United Kingdom.
Wuxuu la wadaagaa dhalashadiisa James Rodriguez, Brock Lesnar, Malala Yousafzai (oo ku guuleystay abaalmarinta Noble Peace Prize), Sundar Pichai (Agaasimaha Google), iyo Bill Cosby.
Luukos wuxuu u dhashay hooyadiis, Joanna Shaw iyo aabe, Paul Shaw. Horumarinta Surrey, wuxuu ka qayb galay Dugsiga Sare ee Rydens ee Hersham.
Jacaylkiisa uu u qabo Chelsea FC Gianfranco Zola wuxuu cambaareeyay xiisihiisa kubada cagta. Luukos wuxuu ku koray taageeraha Chelsea waxaana uu sheeganayay inuu markii hore doonayay inuu u ciyaaro kooxda ka dhisan London. Xaqiiqdii, wuxuu isku dayey inuu isku dayo akadeemiyadiisa siddeed jir ah. Shaw wuxuu ka ciyaaray xarunta horumarinta Chelsea ee ku taala Guildford, laakiin looma soo bandhigin boos waxbarasho.
Inkastoo ay niyadjab tahay, Luukos weli wuu xiiseynayay kubada cagta. Waxa uu sii waday riyadiisa ah da 'yar. 2001, wuxuu ku biiray Hersham, kadibna wuxuu u gudbiyay Molesey Juniors isagoo isku dayaya in uu naftiisa isku dhiso akadeemiyada kubadda cagta. 2003, Southampton waxay ku siisay wicitaan. Ka dib markii uu u ciyaarayay kooxda sannadka 11 (2003-2011 ee akadeemiga), Luke ayaa ku biiray Manchester United oo ku biiray 2014 isagoo ah ciyaaryahanka ugu qaalisan ee soo iibsaday kooxda. Inta kale, sida ay yiraahdaan, hadda waa taariikh.
Luke Shaw Hooyo sheeko dheeri ah Xaqiiqooyinka loo yaqaan 'Biography' -Nolosha Xiriirka
Wakhtiga qorista, Luukos waa mid aan is qabin laakiin wuxuu ku raaxeeyaa xiriirka uu la leeyahay saaxiibkiisa la jecel yahay Shelby Billingham. Lammaanuhu waa mid aad u faraxsan oo isxigxiga ku raaxeysta.
Luke Shaw iyo Girlfriend, Shelby Billingham
Laba iyo Shelby labaduba way kala qaybsadeen sida ugu dhakhsaha badan ee uu uga soo guuray London ilaa Manchester. Tani waxay ahayd markii uu bilowday xiriirka saaxiibtiis Anouska Santos. Jacaylku wuxuu u eg yahay inuu ka koro xoog iyo xoog.
Dhowaan, daafaca bidix ayaa la arkay isagoo sameynaya habeen dambe habeenkii Christmas soo iibsashada xaaskiisa. Shaw, oo dhan dhar gashan oo madow leh koofiyad qoyan si ay isaga difaacdo cimilada qaboobaha. Labaduba waxay aad u jecel yihiin in ay fiiriyaan dukaanka dahabka ah ee loogu talagalay ka hor maalinta weyn.
Luke Shaw wuxuu ku iibsanayaa alaab dahab ah oo uu la leeyahay saaxiibkiisa, Anouska Santos.
Laakiin markii ay go'aamiyeen wakhtigii ay ku dhufteen qaybta qaybta kaashka ah ee dukaamada dahabka, waxay qorsheyn karayeen maalin-gaarka gaarka ah ee mustaqbalka fog. Hoos waxaa ku qoran Luke Shaw iyo saaxiibtiis Anouska Santos oo ku jira dhacdadii casho ee United4Unicef.
Luke Shaw iyo jacaylkiisa, Anouska Santos
Luke Shaw Hooyo sheeko dheeri ah Xaqiiqooyinka loo yaqaan 'Biography' -Nolosha Qoyska
Luukos wuxuu dhashay oo wuxuu u keenay qoys qibrad heer sare ah oo ah Kingston Upon Thames United Kingdom. Tani waxay ahayd ka hor intaanay maalgashiga kubadda cagta la siinin wiilkooda kowaad.
Waa ilmo ay jecel yihiin waalidkiis, sidaas darteed wuxuu ka helay jacayl weyn iyo fiiro gaar ah oo uu ka helay qoyskiisa. Intaa waxaa dheer, wuxuu sidoo kale u qadariyaa qoyskiisa guusha. Hoos waxaa ku jira Mr. Paul Shaw, oo ah xaaskiisa uu jecel yahay Joanna Shaw (dib u eeg) iyo carruurtooda oo ay ku jiraan Luke Shaw.
Luke Shaw Qoyska
Luukos aabbaha iyo hooyadu waa waalidiinta ugu wanaagsan ee had iyo jeer la taagan isaga xaalad kasta.
Luke Shaw Hooyo sheeko dheeri ah Xaqiiqooyinka loo yaqaan 'Biography' -Luke Shaw Brother Vs Mourinho
Walaalkii LUKE SHAW walaalkiis ayaa mar horeyba beeniyay isagoo raacaya Twitter-ka weyn kaas oo uu u muuqday inuu ku xadgudbay Jose Mourinho.
Ben Shaw ayaa u muuqda inuu ka careysiiyay ka dib markii Special One uu ka soo tuuray walaalkiis oo ka mid ah kooxdii uu kooxdiisa ka lumiyay 4 - 0 Chelsea.
Ka hor inta uusan bilaabin xadgudubka Jose Mourinho, Ben wuxuu markii hore u muuqday inuu jeclaan lahaa kooxda, isagoo yiri: "Nasiib wacan maanta Utd."
Si kastaba ha ahaatee, arrimuhu si dhakhso ah ayey u soo noqdeen markii ay kooxdu ku dhawaaqday Shaw waa la tuuray, iyada oo Ben ku eedeeyey inuu soo qoray warbaahinta bulshada.
Benny ayaa ka careysiiyay Jose Mourinho
Luke Shaw had iyo goor naftiisa ayuu ka heley dhammaadkii helitaanka Jose Mourinho taas oo keentay inuu ka tago kooxdiisa. Jose inta badan si cad ayaa loo dhaleeceeyay Shaw illaa iyo in ciyaartoyda waayeelka ah ee United ay ku qasbeen inay ku raaxeystaan ​​daafaca da'da yar.
Jose Mourinho ayaa ka careysiiyay Luke Shaw
Luke Shaw Hooyo sheeko dheeri ah Xaqiiqooyinka loo yaqaan 'Biography' -Leg Break Video
Luke Shaw ayaa hal mar la xanuunsaday kulankii lugta labaad ee Champions League ee PSV.
Daqiiqado ka yar daqiiqadaha 15 ee ciyaarta, daafaca bidix ee daafaca ayaa ku qasbay inuu garoonka ku soo geliyo rigoorayaal markii Hector Moreno, daafaca PSV, oo si aan macquul ah ugu dhicin.
Luke Shaw Hooyo sheeko dheeri ah Xaqiiqooyinka loo yaqaan 'Biography' -Personality
Danny Rose waa Cancer waxayna leedahay sifooyinka soo socda ee shakhsiyadiisa.
Luke Shaw ee xoogagga: Tenacious, aad u qiyaaso, daacadnimo, shucuur, caan ah oo caqli gal ah.
Luke Shaw ee Tabar darrida: Moodi, feker ahaan, shaki, cagajugleyn iyo ammaan la'aan.
Waa maxay Luke Shaw jecelyahay: Farshaxanka, hiwaayadaha guriga, saldhigga u dhow ama biyaha, caawinta kuwa aad jeceshahay, cunto fiican oo saaxiibo ah.
Maxay tahay Luke Shaw? Shisheeyaha, dhaleeceyn kasta oo hooyada ah iyo muujinta nolosha qofka.
Luke Shaw Hooyo sheeko dheeri ah Xaqiiqooyinka loo yaqaan 'Biography' -Sababta ka dambeysa Nickname
The Sun markii la soo wariyay inay heystaan ​​ciyaartoyda United ayaa lagu naaneesay Luke Shaw 'Six million Dollar Man'. Tani waxay sabab u tahay isaga oo leh caqiido la mid ah Astronaut Steve Austin oo si xun u dhaawacmay markii uu gantaalihii burburay.
Luukos ayaa sidoo kale dhaawac jilibka ka soo gaaray kulankii Champions League ee PSV Eindhoven.
Luke Shaw Hooyo sheeko dheeri ah Xaqiiqooyinka loo yaqaan 'Biography' -Xaqiiqda Xaqiiqda Minded
Luke Shaw ayaa barbardhac la galay garsooraha daafaca bidix ee Manchester United Patrice Evra, taasoo ku saleysan cidda qaaday weerarka ugu badan ee weerarka. Haa, Evra wuxuu ku kasbaday sumcad sida weerarka weerarka BUT stats soo jeediyay Shaw waa ka fiican yahay.
Xaqiiqooyinka ayaa shaaca ka qaaday Luke Shaw waa weeraryahan badan oo weerarka ka fiican Evra
Marka loo eego tirakoobyadaXiddiga da'da yar ayaa 141 u soo bandhigay ciyaartoydiisa xili ciyaaredka 35 Premier League - in ka badan Evra oo uu hogaamiyay - islamarkaana uu ku guuleystay 56% guulihii uu ka gaaray kubada.
Luke Shaw Hooyo sheeko dheeri ah Xaqiiqooyinka loo yaqaan 'Biography' -Paul Scholes ayaan ku faraxsaneyn
Mid ka mid ah Shaw ayaan wali garoonin tan iyo taariikhda Paul Scholes. Ciyaaryahanka khadka dhexe ee Manchester United ayaa si joogta ah u ciyaaray garaaceen iyadoo qiimaha lagu iibin doono kooxdiisii ​​hore ee uu ku soo iibsaday daafaca, waxaana uu sheegay in Red Devils ay saxiixi laheyd weeraryahan. Scholes, oo United u saftay xilli ciyaareedka 718, ayaa dhawaanahan lagu soo waramayaa inuu ku biiray 20 + "Nacas".
Paul Scholes ayaa diidanaa Luke Shaw
In uu erayada ..."Laba daafac bidix oo qiimihiisu yahay £ 34 waxa ay muujineysaa sida ciyaarta oo kale ay u dhacday. Sidaa darteed lacag, Waxaan doonayaa weeraryahan bartilmaameed u ah goolasha 30 xilli ciyaareed "
Luke Shaw Hooyo sheeko dheeri ah Xaqiiqooyinka loo yaqaan 'Biography' -Qofka ugu xun ee ka soo horjeeda
Luke Shaw ayaa ka soo horjeesatay qaar ka mid ah kuwa ugu cabsida badan. Kuwa jecel Eden Hazard, Daniel Sturridge iyo Wilfried Zaha, Luis Suarez dhammaantood way isku wareegayaan.
Laakiin waa kuwee ninka ugu cabsida badan? Maya, ma ahan Suarez, oo loo yaqaano qaniinyada daafaca ka soo horjeeda. Waa Victor Moses. Markii la weydiisto dhawaan Twitter Q & A kaasoo ahaa kii ugu baqay ee uu ka soo horjeeday, xiddigta ayaa ku jawaabay, malaha yaab leh:
"Taasi waa mid adag laakiin waxaan u socdaa Victor Moses, si buuxda u ah xawaaraha iyo awoodda. Marwalba waan ogaaday in imtixaan aad u adag. "
Luke Shaw Hooyo sheeko dheeri ah Xaqiiqooyinka loo yaqaan 'Biography' -Waardiyeyaasha Waayeelka
Inkastoo uu yahay daafaca afaraad ee adduunka ugu mushaharka badan, ayaa mushaharka ku qaadanaya £ 100,000-isbuucii, ciyaartoyda iyo taageerayaasha ma ahan inay filanayaan inay arkaan Luke Shaw darawal gaar ah.
Taasi ma ahan sababtoo ah mid aan awoodi karin - dakhligiisa United wuxuu ka dhigay mid ka mid ah ciyaartoyda ugu caansan adduunka.
Markaa kadib, waxay ahayd sababtoo ah isagu weli ma uusan dhaafin imtixaankiisa wadista. Waa waqtiyo sidaan oo kale ah oo aad xusuusatid sida dhallinyaradu u ahayd Shaw wakhtigaas.
Waxa uu ahaa kaliya 18 markii uu ku biiray United. Ka hor inta uusan ku biirin, wali wuxuu la noolaa waalidkiis. Waalidiintiisa ayaa inta badan u kaxaynaya si ay u tababaraan una ciyaaraan ciyaaraha. Tani waxay ahayd xitaa ka hor inta uusan u socon koobka 2014. Shaw waxa uu qaatay kooras wadajir ah oo soconaya toddobaadle ah, ka dib markii uu ku guuleystay 2014 World Cup Koobka Adduunka. Tani waxay aheyd dadaal ah in ugu dambeyntii uu helo liisankiisa. Kala bedelka da 'wayn ee qaangaarka ah ee qaangaarka ah ee qaangaarka ah ayaa runtii wax kale.
Waad ku mahadsantahay akhrinta sheekada Danny Rose ee Sheekada Carruusha iyo xaqiiqooyinka aan la sheegin. At LifeBogger, waxaan ku dadaalnaa saxnimada iyo caddaaladda. Haddii aad aragto wax aan ku habboonayn qodobkan, fadlan ku qor faalladaada ama nala soo xiriir!.
Southampton Wargeysyada Kubadda Cagta